योगी शिवशक्तिनाथ - विकिपिडिया
चित्र:योगी शिवशक्तिनाथ , Yogi Shivshaktinath .jpg
योगी शिवशक्तिनाथ ज्यू को प्रबचन मुद्रा को तस्बिर
योगी श्री शिवशक्तिनाथ ( अंग्रेजी – Yogi Shivshaktinath ) ज्यू एक उच्च गृहस्थ योगी हुनुहुन्थ्यो । उहाँको पारिवारिक नाम लालबहादुर ढकाल थियो । उहाँले गृहस्थ धर्म निभाउनुहुँदै आँफुलाई पूर्णरूपमा अध्यात्ममा डुबाई अध्यात्मको सर्वोच्च शिखरमा पु¥याउनुभयो । आध्यात्मिक उच्चतामा पुगेर लाखौँ सिद्धि शक्तिका स्वामी भएपनि त्यसको प्रकटीकरण र घमण्ड लेखमात्र पनि उहाँको जीवनमा देखिएन ।
२ आध्यात्मिक देन
पूर्वीय मान्यतामा हिमालय तथा सूक्ष्म सत्तामा विभिन्न अदृश्य तथा शक्तिशालि सङ्गठन तथा आश्रमहरूको सत्ता स्वीकार गरिन्छ । त्यस्तै शक्तिशालि सङ्गठन मानिन्छ “सावर संरचना” । त्यही सावर संरचनाबाट पृथ्वीका लागि सम्प्रेषित योगी का रूपमा मानिनुहुन्छ योगी श्री शिवशक्तिनाथ ।
गोरखा को उत्तरी खण्डको सुन्दर पहाडी गाउँमा वि.सं २०२३ साल कात्र्तिक १३ गते पिता टेक बहादुर ढकाल र माता एककुमारी ढकालज्यूको माहिला छोरा को रूपमा उहाँको जन्म भएको थियो । गोरखा दिव्य र पुण्य भूमि हो जहाँ श्री श्री महायोगी गुरु गोरखनाथ को प्रत्यक्ष सान्निध्यता पाइन्छ । योगीका हजुरबुबा दल बहादुर ढकालज्यू एक प्रख्यात् वैद्य एवं तान्त्रिक का रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो । यही पारिवारिक माहौलमा उहाँको आध्यात्मिक प्रस्फुटन सहज रूपमा भयो ।
हजुरबुबा ले भविष्यवाणी गर्नुभयो कि “लालबहादुर ढकाल एक उच्च योगी बन्नेछ” । हजुरबुबाकै निर्देशनबमोजिम उहाँले गुरु खोज्न थाल्नुभयो । वि.सं २०५० साल अप्रिल २१ गते हिमालयका उच्च योगी निखिलेश्वरानन्द (डा. नारायणदत्त श्रीमाली) सँग दीक्षा लिनुभयो ।
आध्यात्मिक देन[सम्पादन गर्ने]
गुरु निर्देशन बमोजिम उहाँले नेपाल फर्केर गुरु गोरखनाथ को आज्ञा शिरोपर गर्दै समाजलाई अध्यात्म र गुरु मार्गमा डोर्याउने प्रयास गर्नुभयो । सावर संरचना शक्ति केन्द्रका प्रतिनिधि बनी नवनाथ चौराषी सिद्धहरूको चौँथो संरचना निर्माणका लागि अ.ना.प. संरचनालाई मूर्त रुप दिने कार्य गर्नुभयो ।
योगीको जीवन सामान्य तर रहस्यमय र निकै सङ्घर्षमय थियो । उहाँले गुरु योजनालाई मूर्त रुप दिने क्रममा विदेश यात्रामा पनि निस्कनुभएको थियो । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियरूपमा ध्यान, साधना तथा आध्यात्मिक उच्चताका दिव्यतम् एवं अनगिन्ती दीक्षाहरु प्रदान गर्नुभएको छ ।
उहाँले समाजमा ध्यान, योग, रेकी, लामाफेरा, सावर विद्या, आत्म जागरण विद्या, कुण्डलिनी दीक्षा, क्रियायोग दीक्षा, मन्त्र, तन्त्र, समाधि, ज्योतिष, आयुर्वेद जस्ता दिव्यतम् र उच्चतम् विद्याहरु मानव कल्याण र आत्म कल्याणका लागि प्रदान गर्नुभयो ।
आफ्नो जीवनलाई आध्यात्मिक जागरणका लागि समर्पित गर्दै रसिया भ्रमणका क्रममा वि.सं २०६८ साल माघ १० गते आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै आफ्नो भौतिक देह त्याग गर्नुभयो ।
सूक्ष्म शरीरको यात्रा भाग(१)
मन्त्र साधना – ऊध्र्वसङ्गति
सत्य नै सत्य
श्री शिव गोरक्ष नाथंप्रदाय
Introduction Of Mahayogis
योगी शिवशक्तिनाथ ज्यूले गृहस्थ धर्ममा रहेर नै सन्यास धर्मका उपलब्धिहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मूल सन्देश दिनुभएको छ ।
योगी नरहरीनाथ ले योगी शिवशक्तिनाथ लाई मात्रै आफ्नो टाउकोमा हात राख्न दिनुभएको थियो ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=योगी_शिवशक्तिनाथ&oldid=904072" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ११:५१, ३ सेप्टेम्बर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।